अष्ट्रेलियामा काम र कमाई मेलबर्नका नेपाली विद्यार्थीको अनुभव - Katuwal
२३ चैत्र २०७२, मंगलवार १०:४४	28,187 पटक-पढिएको
अष्ट्रेलिया गएपछी काम र कमाई सबै राम्रो हुन्छ मात्र सोच छ नेपालमा किनकी यता आएकाहरू नेपालमा रहेकालाई दुख पोखेर आफुलाई दुखी आत्मा बनाउन चाहँदैनन्। फेसबुकमा काम गरेको र पसिना बगाएको फोटो हाल्ने कुरा पनि भएन। त्यसमा पनि काममा हात फोहर र पानीले भिजेको पो हुन्छ। नेपालमा अष्ट्रेलियाको कमाई र भविष्यको कुरा धेरै चर्चामा हुन्छ तर यहाँको दुखका ’boutमा कमै सूचना पुगेको हुन्छ। ’cause ति कुरा फेसबुक अनि च्याटमा कहिँदैनन् भोगिन्छन् मात्र।
अघिल्लो यो हो इलेक्ट्रोनिक्स सामान किन्ने सही समय
पछिल्लो मोबाईलमा सेभिङ: कुन मोबाईल लिने?
के फाईदा छ त? अक्टोपस सर्भे भरेर
३ पुष २०७७, शुक्रबार १२:४२
६ भाद्र २०७२, आईतवार २३:०९	42,411